Abavelisi beeWigs zeeNwele | Fayuan
Abona bantu bavelisa ii-wigs zeenwele ezilungileyo
Iinwele Zentombi enyulu
I-Malaysian Izinwele zoMntu
Iinwele zoMntu zaseBrazil
Iinwele zoMntu waseIndiya
Iinwele zoMntu wasePeru
I-Lace Wig epheleleyo
I-Wig eyenziwe ngokwezifiso
I-Lace Frontal Wig
Abavelisi beeWigs zeeNwele zabantu
Sineemveliso ezikumgangatho ophezulu ezisenza sibe yenye yezona nkampani zibalaseleyo zeenwele zabantu, iimveliso zethu zithandwa kwihlabathi liphela ukusuka eBrazil, India, Vetnam ukuya eFrace, e-Afrika ukuya e-USA kunye nenkampani enye e China.
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho othembekileyo wokuqinisekisa ukuba bonke abathengi banokuziva bekhululekile kwaye beqinisekile ngempahla yethu kwiimveliso zabo.Imveliso zethu zifumana kakhulu izicelo zabo zentengiso ngenxa yeepropathi ezintle. Banempawu ezininzi eziqinisekisa ukuthandwa nokusetyenziswa.
Elona Dabi Lendalo Elihle
Ukuvunyelwa kabini, ukuthunga iintsimbi ezili-100 gramu kwisitokhwe ngasinye
Iintombi eziGqibeleleyo zeNwele eziBalaseleyo
Ubunzima be-400 Gram, Isampulu yoku-odola iSampula, ukuHanjiswa kweentsuku ezi-2 zeShishini
Iinwele eziqondile zoLuntu
Sakhetheke kwiinwele zaseBrazil, iinwele zasePeru, iinwele zaseMalaysia, iinwele zaseIndiya, ulusu lweenwele kunye nokuvalwa kweenwele.
I-curne zeenwele ezijikajika zeenwele I-Lace Frontal Wig
Ibakala leenwele le-12A, umbala weenwele ngokwemvelo, ubude beenwele 12-30 intshi. Iintloko ze-mannequin ze-100% zee-curne zeenwele zithambile, zihlala ixesha elide kwaye kufanelekile ukuthenga, ezilungele abaqalayo nabanwele beenwele. Iinwele kwiBanga le-7A, 8A, 9A kunye ne-10A (iDrawn Drawn) ziyafumaneka. Imibala yeenwele Yonke imibala yendalo (Ngaphandle kokuCwangcisa imibala), Imibala emnyama, imibala yokuKhanya, imibala ye-Ombre. Ubude beenwele 8 "~ 30". Ubunzima be-100G = i-3.5OZ ngeBundle okanye ngokuBekwa ngokwezifiso. Isampulu yoku-odola yamkelwe, i-MOQ yi-1 Pack (100G). Ukuhanjiswa kwexesha ziiyure ezingama-24 ukuba zikwisitokhwe, ziintsuku ezi-5 ~ ezisi-7 ukuba zenziwe ngokwezifiso. Ukuhambisa ixesha Ngokuthetha ngokubanzi, iintsuku ezi-3-5 zokuSebenza. Intlawulo yokuhlawula, i-Western Union, i-T / T, i-Escrow, i-Money Gram, njl. Isaphulelo kwivenkile ethengiswayo. Imbuyiselo & ukutshintshiselana Kuyafumaneka.
Yilahla ukuHamba ngokuKhonza
Bamba umphambili weenqwaba zeenwele ukwenza iingcambu zeenwele zicoceke kwaye ziqiniswe ngokuqhubekeka ukulungisa. thunga umphambili weenqwaba zeenwele zenze i-weft.sew weft hair kunye nokuvalwa okanye umphambili kwi-wigs. hlamba iinwele, susa ioli yeenwele kunye nothuli, ucoce iinwele ezingezizo, wenze iinwele zithambe kwaye zigudileyo. yila iinwele njengoko kufuneka, kunye nokulungisa iipateni zokwenza iinwele zihlale ixesha elide. Sisebenzisa i-fedex OKANYE DHL ukuhanjiswa kokuhambisa kwaye ngeentsuku ezintathu ukuya ezisixhenxe zomsebenzi uya kufumana iodolo yakho emnyango wakho.
Inkxaso yokudonsa ukuhambisa, i-MOQ sisixhobo esinye.
Thumela emva kokufumana intlawulo epheleleyo.
Igama lomthengi, idilesi kunye nenombolo yefowuni inokusetyenziswa njengolwazi lokuhambisa.
Ngaba ungashicilela ilebheli yelogo elula kwaye uncamathisele kwiphakheji.
Fikelela kumgangatho othile wenqanaba inyanga nenyanga okanye iveki, fumana isaphulelo esithile okanye ukuhambisa simahla kwezinye iiodolo.
Unokunika abathengi bakho isipho esincinci (i-3D mink eyelash.
Singene ngokupheleleyo kwimveliso yehlabathi labathengi bethu. Kodwa asizukungena kwiimpawu ezithile zecandelo; sikhumbula nzulu ngemibuzo efana nale: "Yintoni eyenza abathengi bethu babe nemihlali?" "Singawuvuselela njani umnqweno wokuphela wokuthenga komthengi?" Nantsi into esiya kuyenza nawe. Le yindlela esiyiguqula ngayo iprojekthi yakho.
Ii-Wigs zeenwele zoNwele eziNwele
Ngokuphuculwa kwemigangatho yokuphila kwabantu, ii-wigs ziye zangena ngokuthe chu kubomi babantu kwaye ngokuthe ngcembe ziyinto ekufuneka yenziwe ye-fashionistas. Iinwele zeFayuan, uhlobo lwefashoni yewig, ibonelela ngeewigs zangempela zeenwele ezimnyama. Ii-Wigs zisebenza ngeendlela ezininzi, zilungele amadoda, abafazi nabantwana ngokufanayo. Bonke abantu ababuthandayo ubuhle bafanelekile. Izinwele zidlala indima ebalulekileyo kumfanekiso opheleleyo lomntu. Izitayile zeenwele zibukeka zilungile kuyo yonke into. Ngokucacileyo, isitayile seenwele esikulungeleyo kubaluleke kakhulu. Iiwigs zeenwele zokwenene zeenwele ezimnyama ezenziwe nguFayuan Iinwele zii-wigs ezimnyama ezibonakala ziyinyani. Iziva ithambile kwaye ithambile ekuchukumeni, iinwele zintsha kwaye zinobunkunkqele, ukumiliselwa okuphezulu, kungadayiswa kwaye kudwetshwe ngokokuthanda kwayo, kwaye kulula kakhulu ukuba uyikhathalele.
I-Curly Wig ene-Curly Bang yeenwele zeFayuan
Iinwele zeFayuan yingcali yewigs yomntu onobuchule. I I-curly wig ene-curly bang yenziwe nguFayuan iinwele azitshintshanga nje umfanekiso wethu, kodwa zazisa lula kunye namathuba kubomi bethu. Kuba kubafazi abathanda ubuhle, iiwigs zeenwele zomntu ziluncedo kakhulu ebomini. Unokuba nayo i-hairstyle oyifunayo ngaphandle kokucheba iinwele zakho okanye ukuchitha ixesha elininzi.Suchs ezinkulu njenge-curly wigs, abanye abafazi abaneenwele ezimfutshane ngamanye amaxesha bafuna ukutshintsha iinwele zabo, ii-curly wigs ezinkulu zikhetho olufanelekileyo. Kule mihla, i-curly wig ene-curly bang ibe yinto efakelwayo kwifashoni, ukunxiba kunokubonisa umtsalane wobuntu. Khetha i-wigi ye-Fayuan ye-curly ye-curly kunye ne-curly bang ukongeza isitayile esingaqhelekanga kunye nesihle kuwe.
I-Wavy ezimfutshane zeNwele zeFayuan
Iiwigi ezimfutshane ze-wavy zizinwele ezimnandi, uninzi lwazo ezinika abantu ucoceko kunye neemvakalelo ezicocekileyo. Ukuba ufuna ukwenza iinwele zakho ezimfutshane zibonakale zimnandi kwaye zintle, zama i-wavy ezimfutshane zeenwele zabantu. I-fayuan's ladies ye-wigs ii-tiles ezimfutshane zinemibala emihle kwaye yendalo ukunxiba, zinika imvakalelo ehlaziyayo nenokwaziyo. Ukongeza, isiphumo sale wigs mfutshane siyinyani kakhulu, kwaye akukho bunzima kwi-wigs. I-Fayuan yeenwele ibibandakanyeke kwimveliso yokuvelisa i-wig yeenwele iminyaka engama-21 kwaye inamava atyebileyo kuphuhliso lwewig kunye nophando. Uqinisekiso lomgangatho wewig nganye, le wig ye-curly emfutshane ayikho ngaphandle kwayo. Khetha iinwele ze-Fayuan, yenza ii-wigs zeenwele zomntu, ezifana nale wigs emfutshane i-wavy ibe yeyokwenene kwaye yendalo, ukuze uyinxibe ungakhathazeki.
Ii-Wigs zoMntu omnyama zeNwele zeFayuan
Iiwigs zabantu abamnyama zithandwa kakhulu ngabafazi. Uninzi lwabafazi banxiba iiwigs ezinde ezimnyama zomntu ukubenza bahle kwaye babebancinci. Iifigs zeenwele ezimnyama zomntu omnyama zibizwa ngokuba zii-divatress curly wigs, kwaye isiphumo sayo siyinyani, sinokukhanya kwaye sikhululekile. Umtsalane ohlukileyo wale wigs yomntu omnyama kunzima ukuyixhathisa. Beka kwaye vumela uguquke kwangoko ube ngumtsalane omde we-curly lady. Uninzi lwabasetyhini luziva ngathi emva kokunxiba ii-whatan ze-divatress ezijijike ii-wigs, zibukeka ngakumbi kwaye ziyamhenda, kwaye ubushushu ngokubanzi buye baphucuka kakhulu. Unokuba nayo.
Siyinkampani ye-fayuan yeenwele zoMntu esekwe eGuangzhou yaseTshayina ukusukela kwiminyaka eli-11 edlulileyo kwaye sivelisa imveliso yendalo eluhlaza yoNtu kunye neemveliso ezenziwe ngeenwele zobuntombi ezinje ngeLungu leNwele zoLuntu kunye noMatshini weWebhu kunye neWebhu yesandla, ukuvalwa, umphambili, izandiso, kunye Iinwele ezininzi zizinzile ii-wigs zangaphambili zeleyile
Sineemveliso ezikumgangatho ophezulu ezisenza sibe yenye yezona nkampani zibalaseleyo zeenwele zethu iimveliso zethu zithandwa kwihlabathi liphela ukusuka eBrazil, e-India, eVennam ukuya eFrance, e-Afrika ukuya e-USA kwaye siyinkampani enye e China.
Isizathu sethu kukwenza ukuba abathengi bethu bahambele phambili kolu shishino yiyo loo nto ke sikhathalela umgangatho wethu kunye nokusebenza, ke qiniseka xa usenza ishishini nenkampani yethu ukuba ufumana i-100% yeenwele zomntu kunye nomgangatho ofanelekileyo, yiyo loo nto inkampani yethu yaziwa ngokuba.
Siqinisekisa ngeemveliso zethu UNGATHETHI kwaye ubomi beenwele bude bube bugcinwe
Shiya nje i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikuthumele isicatshulwa simahla kuluhlu lwethu olubanzi loyilo!